Holmes ရဲ့ဘုရားကျောင်းနှင့် Holmes စီရင်စုနယ် | Holmbygden.se
ပစ္စုပ္ပန်ဘုရားကျောင်းတည်ဆောက်ခဲ့ 1903-1904. ဒါဟာသေးသေးလေးဘုရားကျောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်, အလွန်လှပသော chancel ပြတင်းပေါက်များနှင့်အလယ်ခေတ်သစ်သားပန်းပုနှင့်အတူ. တစ်ဦးကနွေးထွေးတောက်ပဘုရားကျောင်း, Neo-Gothic အဘိဓါန်စတိုင် Gustaf Hermansson ကဒီဇိုင်း. ဒါဟာ Sundsvall အတွက် Gustav Adolfskyrkan ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူအတူတူဗိသုကာပညာရှင်င်. အစောဆုံးမှတ်တမ်းတင်ဘုရားကျောင်း, တစ်ဦးအလယ်ခေတ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းခဲ့သည်, Holmes ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာ 1400 ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်. ဒါဟာ Holmes ထိုအချိန်မှစ. တိုင်းရာစုအသစ်တစ်ခုဘုရားကျောင်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်. လက်ရှိတည်ဆောက်ခဲ့မတိုင်မီတည်ရှိသောအသင်းတော် 1790 – 1792.
Holmes အကြောင်းပိုမို Read
Holmes စီရင်စုနယ်ဈAnundgårdသည်သူ၏အသင်းတော်၌Härnösands pin ကိုပိုငျဆိုငျ (karta, လမ်း).
ထိတှေ့: 060-910 09, ညီလာခံ / Indalens pastorats က်ဘ်ဆိုက်
ပြက္ခဒိန်: ဒီနေရာတွင် Holmes အတွက်အသင်းတော်များတွင်ဖြစ်ပျက်နေတာတွေတွေ့မြင်နိုင်သည်, Indal, Liden နှင့်Sättna.
တိုက်ရိုက် Links များ: သမ်မာကမျြး. SV. ဘုရားရှိခိုးကြောငျး – ဘုရားရှိခိုးကြောငျးငယျ, DOP, အတည်ပြုခြင်း, မင်္ဂလာဆောင်, မသာ.
ဥပမာ, On-ခေါ်ဆိုခယဇ်ပုရောဟိတ်ပြောပြရန်ဖြစ်နိုင်သည် (Tel. 112 – ရက် 21-06), မိသားစုအကြံပေးခြင်း, ဝမ်းနည်းခြင်းသို့မဟုတ်ယာယီဘဏ္ဍာရေးအကူအညီ၌သင်တို့အဘို့အထောကျပံ့.
Holmes ရဲ့ပန်းရန်ပုံငွေအဖွဲ့ Holmes စီရင်စုနယ်အတွက်အကောင်းတစ်ဦးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်လက်ဆောင်လှူဒါန်းနိုင်. ဥပမာအားဖြင့်, တစ်စုံတစ်ဦးကိုမှနျဘုရားကျောင်းနှင့်သင်္ချိုင်းဒါမှမဟုတ်အားတက်စရာပန်းစည်းများဆင်ယင်ခြယ်အဟောင်းနှင့်ဖျားနာ.
svenskakyrkan.se အပေါ်ဘုရားကျောင်းအကြောင်းပိုမိုဤနေရာတွင် Read.
100 နှစ်နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာ Liden သတင်းစာထဲကနေအစီရင်ခံစာများ Read 2004 (pdf).
သင်လိုအပ် PDF documents တွေဖတ်ရှုဖို့ Acrobat Reader ကို (ဤနေရာတွင်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲ).
Holmes ရဲ့ဘုရားကျောင်း၏ရုပ်ပုံများ (ချဲ့ရန်ဓါတ်ပုံပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ)
Holmes ရဲ့ဘုရားကျောင်း, Anundgård, သံပြိုင်တေးဆိုသူလူစု.
Holmes ရဲ့ဘုရားကျောင်း, နွေရာသီ 1993. ဓာတ်ပုံကို: Ake Johansson.
Orgelläktarenဈ Holmes. ဓာတ်ပုံဆရာ: Barbro စူးသောဆူး.
အဆိုပါ Holmes ၏ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော် - မက်ဒေါနားပန်းပု. ဖြစ်ကောင်း Gullesson ချိတ်.
လက်ရှိဘုရားကျောင်းအောက်ကရေအိုင်မှာဟောငျးဘုရားကျောင်း site ကို, နွေရာသီ 2009.
ဓာတ်ပုံကို: Ake Johansson.
Holmes ဘုရားကျောင်းပေါ်ကနေပိုများသောဓာတ်ပုံများကို Kyrkokartan.se.
နောက်ဆုံးရသတင်း Indalens စီရင်စုနယ် (Fabebook ထံမှ)
18/3: Oxsjön Liden ညနေအတွက်စနိုးမိုဘီလ်ဘုရားကျောင်းဝန်ဆောင်မှု 1... Oxsjön Liden ညနေအတွက်စနိုးမိုဘီလ်ဘုရားကျောင်းဝန်ဆောင်မှု 13.00 ယနေ့ကံမကောင်းကြောင့်နာမကျန်းမှအားမဖျက်သိမ်း
(Feed generated with FetchRSS)<... ဆက်ဖတ်ရန်
27/2: Fasteretreat Vi befinner oss i fastan och vårvintern, vi kan ana att ljuset blir allt starkare men fortfarande är det en tid kvar av vintern. Det kan vara en tid när vi börjar vara trötta... ဆက်ဖတ်ရန်
Är de sju död... ဆက်ဖတ်ရန်
10/2: Gårdagens musikgudstjänst med Molte Ba... Gårdagens musikgudstjänst med Molte Band i Indals Kyrka, gav oss som var där en trevlig stund som inledning på helgen. Tyvärr var det inte så många som kom och l... ဆက်ဖတ်ရန်
25/4: နယူး, Gäv...
SMHI သတိပေးခြင်းအတန်းအစား 1 för höga flöden: sm & Ari ... ဆက်ဖတ်ရန်